कालो तारा मूनस्टोन - आकर्षक नयाँ अपडेट २०२१ - भिडियो
कालो तारा मूनस्टोन अर्थ र गुणहरू।
हाम्रो पसलमा प्राकृतिक कालो तारा मूनस्टोन किन्नुहोस्
एक सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम सिलिकेट
ओर्थोक्लाज र अल्बाइट
कालो तारा मूनस्टोन अर्थ र गुणहरू
के लाब्राडोराइट कालो मूनस्टोन जस्तै हो?
के कालो मूनस्टोन विरलै छ?
तपाइँ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ कि कालो तारा मूनस्टोन वास्तविक छ?
कालो तारा मूनस्टोन एक रासायनिक सूत्र (ना, के) AlSi3O8 को साथ सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम सिलिकेट हो र फेल्डस्पार समूहसँग सम्बन्धित छ।
यसको नाम एक दृश्य प्रभाव, वा छालाबाट आउँछ, एक सूक्ष्म संरचना भित्रको प्रकाश विच्छेदको कारणले गर्दा फेल्डस्पर तह (लामामे) नियमित हुन्छ।
हामी प्राचीन सभ्यतासहित हजारौं वर्षको लागि गहनाहरूमा मूनस्टोन प्रयोग गर्थ्यौं। रोमीहरूले यस रत्नको प्रशंसा गरे किनकि उनीहरू यो विश्वास गर्छन् कि यो चन्द्रमाको ठोस किरणहरूबाट जन्मेको थियो। दुबै रोमी र ग्रीकहरू आफ्ना चन्द्र देवताहरूसँग मूनस्टोनलाई सम्बन्धित गर्दथे। हालसालैको इतिहासमा। यो आर्ट नोव्यू अवधिमा लोकप्रिय भयो। फ्रेन्च सुनार रेने लालिक र अन्य धेरैले पनि यो ढु using्गा प्रयोग गरी गहनाको ठूलो मात्रा सिर्जना गरे।
सबैभन्दा सामान्य मूनस्टोन खनिज एडुलरिया हो, माउंट नजिकको प्रारम्भिक खनन साइटको लागि नाम हो। इनडुलर इन स्विट्जरल्याण्ड, अब सेन्ट Gotthard को शहर। प्लेटिग्लस फेल्डस्पार ओलिगोक्लासले ढु stone्गाको नमूनाहरू पनि उत्पादन गर्दछ। यो मोती र opalescent schiller को साथ feldspar छ। वैकल्पिक नाम हेक्टालाइट हो।
कालो तारा मूनस्टोन दुई feldspar प्रजाति बाट बनेको छ, orthoclase र albite। दुई प्रजातिहरू बीचमा बाँधिएका छन्। त्यसपछि, नयाँ स्थापित खनिज कूलको रूपमा, इन्टरनेटको orthoclase र अल्बेटले स्ट्याक्ड मा विभाजित गर्दछ, तहहरू समायोजन गर्दछ।
वयस्कता नीलो चमक घटना हो जुन कालो तारा मूनस्टोनको डोम्ड क्याबोचोन सतहमा झल्किन्छ। चम्कोको घटना प्रकाशको अन्तर्क्रियाबाट आउँदछ चन्द्रमाको सानो "अल्बाइट" क्रिस्टलको तहको साथ। जबकि यी साना क्रिस्टलहरूको तहको मोटाईले निलो शिमरको गुणस्तर निर्धारित गर्दछ। तसर्थ, पातलो तह, राम्रो नीलो फ्ल्यास। यो सामान्यतया बिलिभ प्रकाश प्रभावको रूपमा देखा पर्दछ।
निक्षेप मूनस्टोन आर्मेनियामा (मुख्यतया सेवान तालबाट), अष्ट्रेलिया, अस्ट्रियन आल्प्स, मेक्सिको, मडागास्कर, म्यानमार, नर्वे, पोल्याण्ड, भारत, श्रीलंका र संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि देखा पर्दछ।
यसबाहेक, मूनस्टोन फ्लोरिडा राज्य रत्न (अमेरिका) हो। यसलाई १ 1970 .० मा मून अवतरणको स्मरणार्थको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो, जुन क्यानेडी स्पेस सेन्टरबाट उत्रियो। यो फ्लोरिडा राज्य रत्नको बावजुद, यो प्राकृतिक रूपमा राज्यमा हुँदैन।
Feldspars रक-बनाउने टेक्टोसिलिकेट खनिजहरूको समूह हो जुन पृथ्वीको महाद्वीपीय पर्खालको वजनको बारेमा 41१% हुन्छ।
यो मग्मा देखि क्रिस्टलाइज दुवै घुसपैठ र अत्याधुनिक अज्ञात चट्टानों मा रेज को रूप मा र धेरै प्रकार को metamorphic रॉक मा पनि मौजूद छन्।
ढु during्गाको एक बलियो उर्जा तपाईंलाई ध्यानको क्रममा ईश्वरीय स्त्रीसँग जडान गर्न मद्दतको लागि छ। मनमोहक इन्द्रेणी मूनस्टोन क्रिस्टलहरू जस्तै तिनीहरू उच्च चक्रहरू भित्र गुन्जेल, जो मानसिक उपहार को विकास को लागी सहयोग गर्न सक्छ। तिनीहरूको कम्पन त्रिक वा नाभि चक्र भित्र प्रभावकारी छ ताजा र नयाँ उपन्यास विचारहरूको उद्भवसँग मद्दत गर्न।
माइक्रोस्कोप मुनि कालो तारा मूनस्टोन
ल्याब्राडोरिटलाई एक प्लेटियोक्लाज र क्याल्शियम सोडियम फेलडस्परको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। मूनस्टोन एक orthoclase र पोटेशियम सोडियम feldspar हो। त्यसकारण मूनस्टोन र लाब्राडोराइट बहिनी ढु stones्गा हुन्। तिनीहरू एकै परिवारमा छन् तर gemologically तिनीहरू फरक छन्।
यो धेरै दुर्लभ हुन्छ किनकी यो अस्तित्वमा आउँदछ र जहाँ तपाईं तिनीहरूलाई फेला पार्न सक्नुहुन्छ। कालो मूनस्टोन इन्द्रधनुमा मूनस्टोन र सेतो मूनस्टोन जस्ता सबै चन्द्रमाटाहरूको रेस्ट हो।
वयस्कता, आदर्श रूपमा, निलो हुनु पर्छ। शीन एक क्याबोचोनको माथि प्रकाशमा देख्न सकिन्छ, र यसलाई सजिलैसँग हेर्ने कोणको दृश्यबाट देख्नुपर्दछ।
सगाई रिंगहरू, नेकलेसहरू, स्टड इयररिंगहरू, ब्रेसलेटहरू, पेंडन्ट्सको रूपमा हामी अनुकूलन बनाईएको कालो तारा मूनस्टोन गहनाहरू बनाउँदछौं ... कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस उद्धरण को लागी।
हाम्रो पसलमा बिक्रीको लागि प्राकृतिक कालो स्टार मूनस्टोन
कालो तारा मूनस्टोन .5.23..XNUMX२ सीटी
कालो तारा मूनस्टोन .7.52..XNUMX२ सीटी
कालो तारा मूनस्टोन .3.60..XNUMX२ सीटी
कालो तारा मूनस्टोन .3.00..XNUMX२ सीटी
कालो तारा मूनस्टोन .4.37..XNUMX२ सीटी
कालो तारा मूनस्टोन .4.78..XNUMX२ सीटी
कालो तारा मूनस्टोन .9.49..XNUMX२ सीटी
कालो तारा मूनस्टोन .6.86..XNUMX२ सीटी